Mawduuca: Waxtarka Tamarta, Tamarta La cusboonaysiin karo
PosiGen waa shirkad leasing ah oo ah shirkadda dayuuradaha qorraxda ee Maraykanka oo u adeegaya mulkiilayaasha guryaha dakhligoodu yar yahay. Isku xirka "keyfitinta tamarta tamarta" oo leh qaboojiye tamarta qorraxda leh, PosiGen wuxuu caawiyaa macaamiisha Louisiana, Connecticut, iyo New Jersey kharashka biilasha billaha ah iyada oo dhalinaysa awooda nadiifka ah.
$ 8 malyan oo ah $ 30 + Milyan saddex sano oo amaah ah oo leh shuruudaha suuqa; asalkiisu yahay 2017.
Isbarbar-dhigga uu hoggaamiyo maalgashi isku xiran oo ay ka mid yihiin ka-qaybgalka Calvert Impact Capital iyo The Libra Foundation.
Warshadaha laydhka qoraxda ayaa ah laser-diiradda saaraya macaamiisha dakhliga sare, oo ka baxa dakhliga hoose ee dhexdhexaadka ah ee ka yimaada kacaanka tamarta nadiifka ah. Tusaalooyinka Ganacsi ee PosiGen wuxuu diiradda saarayaa macaamiisha la dayacay.
Soo Celinta Lacagta: Waxqabadka wuxuu ku socdaa wadada.
Saameynta Bulshada & Deegaanka: PosiGen wuxuu leeyahay in ka badan 11,000 oo ah nidaamyada qorraxda ee ka shaqeeya in ka badan 65 megawaat oo ah awood awood hooseeysa oo 73% ay ku jiraan guryaha dakhligoodu hooseeyo. Macaamiishu waxay kaydiyaan celcelis ahaan $ 528 sanadkiiba.
Waxa suurtagal ah in la dhiso ganacsi faa'iido leh oo suuq ah oo korontada ku shaqeeyaa ay koronto la'aan ka dhigto, sida sida Posigen ee gobolka Louisiana.
Shirkadaha kireysiga ee dayuuradaha uma baahna inay ku tiirsanaadaan amaahda macaamilka ee ra'iisul-wasa-mariska ah si ay u dhisaan ganacsiyo leh qiimo hooseeya.
Khibradda McKnight ee Posigen ayaa ku wargeliyay deeq-bixiyadayada Minnesota iyo Midwest oo ku saabsan sida loogu daro macaamiisha dakhligoodu hooseeyo ee kacaanka tamarta nadiifka ah.
Sawir Sawir ah: PosiGen